आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २६ गते मंगलबार « Channel Np
मनोरञ्जन टिभी प्रवास पत्रिका स्वास्थ्य/जीवनशैली अन्तर्वार्ता अचम्म धर्म/दर्शन कृषि/प्रविधि loading...
आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २६ गते मंगलबार
प्रकाशित मिति : Tuesday, January 10th, 2017 at 12:02 AM
– श्री शाके १९३८, मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २६ गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ जनवरी १० तारीख – पौष शुक्ल त्रयोदशी तिथी – २१:३८ बजेसम्म चन्द्रमा वृष राशिमा १७:४९ बजे सम्म सूर्य दक्षिणायनं हेमन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर)
मेष राशि: विस्वासिलो ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्छ । गर्न लागिरहेको काममा आँट र साहसको कमीले सामान्य धोका हुन सक्छ । नयाँ लगानीको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुहोला । झंजटपूर्ण यात्राको योग रहेको छ । दिन मध्यम रहने छ ।
वृष राशि: शारीरिक आलस्यले सताउने छ । नयाँ कार्यको थालनीले मनमा प्रसन्नताले वास गर्नेछ । दाम्पत्य शुखमा भने केहि खटपट रहन सक्ला । नयाँ मित्रताको लागी समय राम्रो रहेको छ । मनोरन्जनको क्षेत्रमा केहि खर्च हुन सक्छ ।
मिथुन राशि: सामान्य आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ला । हितैषी मित्रजनहरुको निम्ति खर्च गर्नु पर्ने योग रहेको छ । केहि धनमाल हराउन सक्ला सजक रहनु होला । यात्रामा चोटपटकको सम्भावना रहेको हुनाले विशेष सावधान अपनाउनु पर्नेछ ।
सिंह राशि: मनमा सामान्य चिन्ताले वास गर्ने छ । सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ । परिवारको प्रेरणाले नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्छ । प्रेम सम्वन्धमा भने केहि नकारात्मक असर रहला । पारिवारिक वियोगले सताउने छ ।
तुला राशि: वाणीका कारण कुलकुटुम्बहरुसंग मतभेद रहला । मित्रजनहरु बिच आफ्नै निर्णय लाद्नाले मित्रजन रुष्ट रहलान । गरिरहेको कार्यक्षेत्रमा मन नलाग्नाले साधारण झन्झट व्यहोर्नु पर्ला । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । दिन त्यति राम्रो छैन ।
वृश्चिक राशि: स्वास्थ्य क्षेत्रमा सानपानको अभाब रहनाले सामान्य खराब रहला । कार्य क्षेत्रमा विशेष प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमताको कारण कार्य सम्पादनमा सहज हुनेछ । व्यापार व्यवसाय भने मध्यम रहने छ । दाम्पत्य सुख प्राप्त हुनेछ ।
धनु राशि: तपाइको उदारताको फाईदा अरुले उठाउन सक्लान । लगानी उठाउन विशेष झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । मातृ पक्षका व्याक्तिहरुको निम्ती समान्य खर्च हुने योग रहेको छ । स्वास्थ्य सम्वन्धि समस्याले सताउने छ । शत्रु सवल रहलान ।
मकर राशि: सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्ला । विधा आर्जनको क्षेत्रमा साधारण खर्च हुन सक्छ । कार्यक्षेत्रमा विशेष मन नलाग्नाले आर्थिक क्षेत्रमा समान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । मनोरन्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । दिन त्यति राम्रो रहेको छैन ।
मीन राशि: मित्रजनको पूर्ण बिश्वासले कार्य क्षेत्रमा धोका हुन सक्छ । आम्दानी क्षेत्रका स्रोत फेला परेपनि अरुको बहकाबमा लाग्नाले झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । साधारण चोटपटकको सामना गर्नुपर्नेछ । आफ्नो कुरा माथि राख्ने बानीले अब्झस आउन सक्छ ।
काँचो केराको सेवन स्वास्थ्यको लागि फाइदै फाइदा,क्‍यान्सर देखि कब्जियत निको
एउटा यस्तो मन्दिर जहाँ मानिस जान डराउँछन्
महिलाको स्तन छोएर भविष्य बताउँछन् यी वृद्ध (भिडियोसहित)
जहाँ पोल्ट्री फार्म जस्तै महिलाबाट बच्चा जन्माएर बेचिन्छ
देश टुक्याउने कुरा गर्ने सि के राउतलाई रविले यसरी हप्काए – हेर्नुहोस् सिधा कुरा जनतासंग
तेरिया मगरले सम्पूर्ण देश बिदेशमा रहेका नेपालीलाई गर्दै छन् यस्तो अनुरोध (भिडियो)
किन नमरुन् त यमबुद्ध ? यस्ता थिए बाध्यताहरु, एउटा दुखद रहस्य...
तेरियाले भनिन, 'यो जित मेरो होइन, सिंगो नेपाल र नेपाली जित हो !' - हेर्नुहोस् भिडियो
झलक दिख्ला जा सिजन-९ चेली तेरियाको लाईभ प्रस्तुति - भिडियो हेर्नुहोस
रेखाले सबै देखाए पछि हङगामा - हेर्नुहोस् बोल्ड फोटो शुट...